मृतावस्थामा भेटिएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको शव परीक्षण रिपोर्टका आधारमा प्रहरीले बलत्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालेकाे छ।
कोभिड-१९ को असरबाट उम्किदै अर्थतन्त्र, यस्तो छ आधा वर्षको तथ्यांक
कोरोनाभाइरसका कारण गत वर्षको चैत यता थला परेको अर्थतन्त्र फेरि पुरानै गतिमा चलायमान हुन थालेको नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनाको तथ्यांकले देखाएको छ।
दोस्रो चरणको कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान शुरु, १० दिनमा थप तीन लाखलाई लगाइने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। दोस्रो चरणमा पनि लक्षित समूहलाई ‘कोभिशिल्ड’ खोप दिइनेछ।
दिगो विकासको लक्ष्यमा मिश्रित सफलता, लक्ष्य हासिल गर्न बर्सेनि करीब रु. ६ खर्ब अपुग दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रु.२० खर्ब २५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने भए पनि हरेक वर्ष झण्डै २९ प्रतिशत रकम अपुग हुँदै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
भागरथीको हत्याका पाँच दिन, कहाँ पुग्यो अनुसन्धान? स्कुल र प्रहरी चाैकी नजिकै मृत भेटिएकी बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको छ। पाँच दिनसम्म प्रहरीले कुनै ‘क्लु’ पाएको छैन भने परिवारजनले शव बुझ्न मानेका छैनन्।
शीतलहरमा घुर ताप्दा डेढ महीनामा नौको मृत्यु, सात महिला शीतलहरको चिसो छल्न घुर ताप्दा डेढ महीनामा तराई-मधेशमा नौ जनाको ज्यान गएको छ। उनीहरुमध्ये सात जना महिला छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा नटुङ्गिदै आयोग निर्वाचनको तयारीमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला निर्वाचन आयोगले १७ र २७ वैशाखका लागि घोषित चुनावको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका, दल दर्ता र आचारसंहिता प्रकाशनको तयारी गरेको छ।
देशभर एक लाख ८४ हजारले मात्रै लगाए काेराेना खोप कोरोना भाइरसविरुद्ध पहिलो चरणमा चार लाख मानिसलाई खाेप लगाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि एक लाख ८४ हजारले मात्रै लगाएका छन्।
हिउँले ढकमक्क सिमकोट (तस्वीरहरु) दुई दिनदेखि परेको हिउँले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट सेताम्य भएको छ। तापक्रम माइनसमा झरेपछि चिसो अत्यधिक बढेको छ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी प्रदेश १ को प्रदेश सभाको बैठक आज बस्न लागेको छ। १९ दिनपछि बस्न लागेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको छ।
माटोको ढिस्कोले पुरिएर कैलालीमा तीन युवतीको मृत्यु, दुई घाइते
माटोको ढिस्कोले पुरिएर कैलालीमा तीन जना युवतीको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन्।
देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान हुँदैन : पौडेल
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान नहुने बताएका छन्।
सरकारले बेवास्ता गरेपछि भारतमा किसानको चक्काजाम कृषि कानूनविरुद्ध आन्दोलनरत किसानले आज भारतमा चक्काजाम आह्वान गरेका छन्। किसानको चक्काजामलाई ध्यानमा राखेर दिल्लीका १० वटा मेन्ट्रो स्टेसन बन्द गरिएका छन्।
संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध नागरिक अगुवाको मार्चपास संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा नागरिक अगुवाहरुले आज बिहान काठमाडौंमा मार्चपास गरेका छन्।
ओली समूहकाे जनसभामा १६ ठाउँबाट जुलुस आउने नेकपा (ओली) समूहले आज नारायणहिटी दरबारअगाडि आयोजना गर्न लागेको जनसभाका लागि केहीबेरमा काठमाडाैंका विभिन्न १६ स्थानबाट जुलुस निस्कने भएकाे छ।